FANDALINANA SORATRA MASINA 28 Mai 2010
Accueil Ny Mpitandrina Fampianarana FANDALINANA SORATRA MASINA 28 Mai 2010
Araka ny efa fantan-tsika dia tamin’ny Zoma 28 Mai 2010 ny fandalinana ny soratra masina .
Ny loha-hevitra nodinihina tamin’izany dia :
- Ny Fahafahana natolotr’Andriamanitra ny olombelona.
- Nanaja ny fahafan’olombelona Andriamanitra, ary miantso azy (ny olombelona) izy, fa tsy mandidy ary mibaiko azy fa tsy manery.
- Izany fahafahana izany dia tsy hataon-tsika entina araka izay tiantsika hatao fa misy harifanina napetrak’Andriamanitra ahazoan-tsika miaina izany amin’ny maha Zanak’Andriamanitra antsika- (Jaona 8 : 32-33;36).
Ny fotoanan-tsika manaraka dia ny Zoma 11 Juin 2010 amin’ny 9 ora alina ao amin’ny Centre le Rocheton.
- Ny Loha-hevitra ho dinihina amin’ny manaraka dia : ny FITIAVANA sy ny FAHAFAHANA. (Galatiana 5 : 13)